Jiri ejiji mbụ gị gbanye pipụ Pi Akụrụngwa n'efu
3D ebi akwụkwọ na-eru nso anyị tebụl. Nke a na-enye anyị ohere ịmepụta ngwa ndị ọzọ ahaziri iche na nke mbụ na ngwa ndị ọzọ ndị ọrụ ole na ole nwere ma ọ bụ nke enweghị ike ịchọta na ụlọ ahịa elektrọnik. Lee, anyị na-egosi gị ndepụta nke ikpe ma ọ bụ ihe mkpuchi maka Pipe Pi anyị anyị nwere ike ibipụta ya na ngwa nbipute 3D ma jiri ogwe osisi Raspberry Pi, ma nke kachasị ya na nke ọbelata. Maka nke a naanị anyị ga-achọ faịlụ nbipụta, ihe nwere agba yana onye nbipute 3D.
2 Achịcha apụl
3 Egwuregwu egwuregwu
4 Obere obere cube
Fans nke Dọkịta Onye ka dị ọtụtụ. Na otu onye n'ime ha kere ihe yiri TARDIS nke anyị nwere ike ibipụta ma jiri ya na Pipe Pi. Ikpe ahụ na-arụ ọrụ zuru oke, ya bụ, anyị nwere ike ijikọ eriri ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla na Rasberi Pi na-enweghị ịkwatu ikpe ahụ. Enwere ike ịchọta faịlụ a na-ebipụta na njikọ a.
Ọ bụ ezie na achịcha anaghị eri oge ọkọchị, maka Raspberry Pi, o nwere ike ọ gaghị. Bụ apụl achịcha shei Ọ bụ nnukwu okwu maka ndị ọrụ nwere eze dị ụtọ na ọbụlagodi iji bọọdụ raspberry dị ka obere kọmputa na ụlọ ahịa achịcha achịcha. N'ụzọ dị mwute, mgbe ị na-ebi akwụkwọ na otu agba, pastel a enweghị ezigbo nghọta, mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Nwere ike nweta mbipụta faịlụ na njikọ a.
The Nintendo NES bụ ihe ka n'ọtụtụ ebe na-emegharị ikpe ma enwere ike ịmegharị ọzọ: Nintendo 64, PlayStation, Sega Megadrive, Atari, wdg ... Enwere ọtụtụ njikwa egwuregwu nke faịlụ ị nwere ike inweta njikọ a.
Obere obere cube
Ikpe a dị ezigbo mkpa kamakwa ọ na-ewu ewu. Thedị cube nwere agba dị ka ọcha ma ọ bụ oji abụghị naanị a oké ji achọ ihe ma ọ nwere ike ime ka anyị nwere a utu Pi dị ka a mediacenter Maka salonlọ Mmanya. Enwere ike ịchọta faịlụ nke cube a na njikọ a.
Ndị a bụ ụfọdụ ụdị casings anyị nwere ike ịchọta n'ịntanetị, ma enwere otutu na anyi nwere ike ichota ulo ozo di iche site na ntinye akwukwo 3D. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịnweta onye nbipute 3D, enwere nhọrọ mgbe niile ịzụta ikpe gọọmentị, n'agbanyeghị na ọ bụghị otu Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Jiri ejiji mbụ gị gbanye pipụ Pi
Match.com 3D-bipụtara ndị mmekọ gị nwere ike na mgbasa ozi ọhụụ ya
China na-egosi dina kamikaze drones dị iche iche